Spain oo laga eryi karo tartamada caalamiga ah sida KA2018 + Sawirro (Arag safka Catalonia) – Gool FM
Spain oo laga eryi karo tartamada caalamiga ah sida KA2018 + Sawirro (Arag safka Catalonia)
(Madrid) 30 Sebt 2017 – FIFA ayaa la sheegayaa inay awood u yeelan karto inay Spain ka cayriso tartamada caalamiga ah, jeer ay sanad wax ka yar ka harsan yihiin KA2018 oo lagu qabayo Ruushka.
Waxay haatan xiisadi ka oogan tahay dalka Spain maaddaama ay Catalonia ku dhawaaqday inay berri oo Axad ah dadka gobolkaas ka qaadayso afti jeebkeeda oo aan looga fasax qaadanin xukuumadda Madrid taasoo ay diiddey Spain oo ku tilmaantay tillaabo aan dastuuri ahayn.
Mid ka mid ah natiijooyinka ka dhalan doona haddii ay Catalonia ka go’do Spain waxaa ka mid ah inay FC Barcelona oo ah kooxda 2-aad ee dunida ugu qaalisani waayi doonto xuquuqda ay haatan uga qayb qaadanayso horyaalka La Liga ee dalkaasi Spain.
Madaxwaynha La Liga ee Javier Tebas, ayaa haatanba hoosta ka xarriiqay inaysan Barca kasii mid ahaan doonin horyaalka Spain haddii ay goostaan, iyadoo haddii ay taasi dhacdo ay meel cidlo ah kusoo dhacayso has said the club would not be allowed to remain in the league in the event of secession koox uu Forbes Megazine ku qiyaaso $3.64 bilyan oo doollar.
Yeelkeede, FIFA ayaa la sheegayaa inay arrintan soo faragelin karto iyadoo cuskanaysa qodobka dhigaya inaysan dowladuhu soo dhex gelin arrimaha isboortiga, iyadoo Spain ka reebaysa KA2018, waloow aysan caddayn inay taasi soconayso haddii ay go’do Catalonia.
Waxaa arrintan la baajin karaa haddii la bedelo sharciga Spain ee arrintan diidaya, balse maaddaama ay xildhibaannada Spain badankoodu kasoo horjeedaan go’itaanka Catalonia, uma badna inay sidaa yeelayaan haddii ay go’do Catalonia.
Paris Saint-Germain’s Brazilian defender Marquinhos (L) vies with Barcelona’s Uruguayan forward Luis Suarez during the UEFA Champions League round of 16 first leg football match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona on February 14, 2017 at the Parc des Princes stadium in Paris. / AFP / CHRISTOPHE SIMON (Photo credit should read CHRISTOPHE SIMON/AFP/Getty Images)
Ancelotti oo doonaya inuu Wenger ka badalo shaqada Arsenal
GOOGOOSKA: Manchester United vs Crystal Palace 4-0 (Man U iyo afar maxaa kala haysta)